अन्तर सम्वाद Archives - Chautari Post Online
सेतो दुबी आउने कारण र निराकरणका उपाय [भिडियो]
अन्तर सम्वाद, स्वास्थ्य
डा सन्जुबाबु श्रेष्ठ राम्रो हुन सबैलाई मन लाग्दछ। तर अनुहार तथा शरीरमा आउने सेतो दुबीका कारण धेरै युवायुवती पीडित छन्। सेतो दुबी के हो? कसरी आउँछ र यसबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा छाला रोग विषेशज्ञ डा सन्जुबाबु श्रेष्ठसँग स्वास्थ्यखबरकी बिन्दु शर्माले गरेको कुराकानीः छालामा आउने सेतो दुबी के हो? यो किन आँउछ? मान्छेको शरीरमा या अनुहारमा सेतो रङको सानो दाग (पिगमेन्ट लस) आउने समस्या दुबी हो। धेरै मान्छेले यसलाई 'कस्मेटिक डिस्फिगरमेन्ट'को रुपमा लिने गर्छन्। यो भन्नुको अर्थ शारीरिक सौन्दर्यताको समस्या हो। तर यसले सौन्दर्यतासँग मात्र सम्बन्धित नभएर मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। छालाको रङ बनाउन रगतको मेलानोसाइट कोषले उत्पादन गर्ने मेलानिन पिगमेन्टले सहयोग गरेको हुन्छ। मेलानिन पिगमेन्टकै कारण कसैको छाला गोरो हुन्छ त कसैको कालो हुन्छ। मेलानिन पिगमेन्ट उ
गाउँस्तरसम्म पुगेर नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको राज्यको एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग नेपाल प्रहरीबारे बेला बेलामा अनेक चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । कहिले आन्तरिक(संगठनका सदस्यहरू) कारण त कहिले बाह्य(राजनीतिक) हस्तक्षेपबाट आइपर्ने आरोह अवरोहलाई झेल्दै यहाँसम्म आई पुगेको नेपाल प्रहरीका अनेक थरी चुनौतीहरू छन् । नेतृत्वमा पुग्नेहरूको ‘आफ्ना र आफन्तहरूप्रतिको मोह’ तथा मौलाउँदो ‘राजनीतिक प्रभाव’बाट संगठनभित्रै देखिएको असन्तुष्टि नेपाल प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भने यसबाट समग्र पुलिसिङमा देखिने असर अर्को ठुलो जोखिम । प्रविधिको विकाससँगै देखिएका अपराधका नयाँ नयाँ शैलीले समाजमा बढाएको सुरक्षा चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न आवश्यक स्रोत साधन तथा तालिम जस्ता कुराहरूमा देखिएको बेपरवाहको असर अन्तत्वगत्वा समाजमा नै पर्ने कुरा सर्व विदितै छ । यी र यस्तै परिवेशका बिच समग्र पुलिसिङका विषय
अस्पतालको अवस्था र आमनागरिकको सहजलाई पनि सरकारले ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ । ( अन्तर संवाद ) डा शरदचन्द्र प्रकाश राई , नेत्ररोग बिशेषज्ञ
. डाक्टरसाप हामीले सरल भाषामा स्वस्थ्य आँखा भनेको कस्तो भनेर कसरी बुझ्न सक्छौँ होला ? कुनैपनि भिज्युल एड जस्तै चश्मा, कन्टयक लेन्स प्रयोग नगरिकन देख्नसक्ने ,साथै आँखा सम्बन्धी कुनैपनि रोग नभएको आँखालाईनै स्वास्थ्य आँखा भनिन्छ । आम सर्वसाधारणले आँखालाई स्वस्थ्य राख्न कसरी सकिएला ? सर्व प्रथम त राम्रो खानपान त्यसमापनि हरियो रङ्गको साग सब्जी, पहेँलो रङ्गको फलफूल, अण्डाको पहोलो भागको , भिटामिनयुक्त खानाहरुको सेवनले पनि आँखा स्वास्थ्य राख्न मदत पु¥याउन्छ ।त्यसरिनै घाम हिड्दा सन ग्लासको को प्रयोग गर्ने । समय–समयमा आँखा परिक्षण गराईरहदा अझ राम्रो हुन्छ । मूलत आँखामा लाग्ने रोगहरु के के होलान् ? आँखामा धेरै प्रकारका रोग लाग्न सक्छन् कुनै सामान्य र कुनै अलिक जटिल पनि हुँछन् त्यसमा पनि खास गरि रिर्फेक्टिभ इरर, मोतिया बिन्दु , सुक्खा आँखा , विभिन्न संक्रमण , एलर्जी र जलबिन्दु लगायतका रोगहरु प
Jun202019 by Chautari Post OnlineNo Comments
नेपाल नीति आफैं बनाउँछन् मोदी
पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको अंग्रेजी सहप्रकाशन ‘दी अन्नपूर्ण एक्सप्रेस’ लाई नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतको दुईपक्षीय सम्बन्धलगाएतको विषयमा दिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : तत्कालीन राजदूतका रूपमा भारतीय नेता र प्रशासकलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो होला ? भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा नयाँदिल्लीमा बसेर देशको सेवा गर्ने अवसर पाएँ। मैले त्यहाँ निर्वाह गरेको भूमिका अनुसन्धान र विश्लेषणको विषय हो। मोदीले अहिले एउटा ‘इथिकल’ र ‘मोरल’ आधारमै सफलता हासिल गरेका छन्। भारतमा स्थिरता कायम हुनु हाम्रा लागि पनि अवसर हो। कूटनीति भनेको एउटा कौशल हो र चातुर्य पनि। त्यसको मापन हामीले पढेको सिद्धान्तका आधारमा नभई परिणामका आधारमा हुन्छ। नेपाली जनता दुई देशको सम्बन्
Jun192019 by Chautari Post OnlineNo Comments
अन्तर सम्वाद, मूल खबर
कम्युनिस्ट नाउँकै सरकार छ । सत्तासीन नेकपाको लोकप्रियता घट्दो छ । तपाईंले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कसरी जनतालाई आकर्षित गर्छ ? जनआकर्षणको सम्बन्ध श्रमिक जनता (किसान, मजदुर, महिला, युवा), देश, देशभक्त शक्ति, लोकतन्त्रवादीहरूका लागि पार्टीले अगाडि बढाउने राजनीतिक विचार, नीति, कार्यक्रमसँग हुन्छ । आज देशको राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक राष्ट्रिय अवस्था सङ्कटपूर्ण एवम् विस्फोटक छ भन्नेमा सबै एकमत छन् । यसको एकमात्र कारण दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता, यसमाथि चढेर मोजमस्ती चलाउने संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र आदि हुन् । हाम्रो पार्टीले विदेशी शक्तिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप र आक्रमणबाट मुक्त, सम्पूर्ण जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मजदुर, किसान, महिला, युवाहरूका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अघि
Jun182019 by Chautari Post OnlineNo Comments
बाबुआमा नै जंकफुड खुवाएर छोराछोरीलाई रोगी बनाउँदै छन् : डा अरुणा उप्रेती
पछिल्लो समय नेपालमा जंकफुड अर्थात् पत्रु खाना खाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। जंकफुडका कारण मानिसहरुमा रोगको भार पनि बढ्दो क्रममा छ। जंकफुडका कारण सबैभन्दा धेरै असर बालबालिकामा परिरहेको छ। जंकफुडले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पार्ने असरका विषयमा जनस्वास्थ्यविद् डा अरुणा उप्रेतीसँग बिन्दु शर्माले गरेको कुराकानी : जंकफुडमा बालबालिकाहरु आर्कषित हुनुको खास कारण के होला? जंगफुडमा बालबालिकाको आकर्षण बढ्नुमा मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो कारण, अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई भन्सामा पाक्ने खानेकुराको महत्वबारे नसिकाउनु र घरमा पकाएको खानेकुरा भन्दा प्याकेटका खानेकुरामा बानी पारिदिनु हो। आमाबुबाको मानसिकता कस्तो छ भने, खाना खान नमान्ने बच्चाले चाउचाउ, कुरमुरे, चाउचाउ जस्ता प्याकेटका खानेकुरा मिश्रण गरेर ख्वायो भने खान्छ। शिशु अवस्थादेखि नै बजारमा पाइने प्याकेजिङ खानेकुरा खुवाउने बानी बसालेपछि छोराछोर
Jun172019 by Chautari Post OnlineNo Comments
अन्तर सम्वाद, कला
अभिनेतृ गौरी मल्लकोे सपना थियो स्टाफ नर्स बन्ने। उद्देश्य एउटा, बाटो अन्तै मोडियो। नायिका बनिन्। यसैबाट नाम कमाइन्। देश–विदेश घुमिन्। नामसँगै प्रशंसक र अवार्ड कमाइन्। विभिन्न प्रतियोगिता र फिल्म अवार्डको जुरी बनिन्। सानोदेखि ठूलो पर्दाका फिल्ममा अभिनय गरेरै जीवन अगाडि बढाइन्। दर्जनौं साना र ठूलो पर्दाका फिल्मका विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छिन्। उनै कुशल अभिनेतृसँग विभिन्न विषयमा गरिएको केही गम्भीर र केही रोचक कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ः विदुर गिरी हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ? हेल्परको बच्चालाई सञ्चोे नभएर ध्यान त्यतै दिइरहेको छु। उसको स्वास्थ्यलाभका लागि दौडधुपमै व्यस्त छु। दुई वटा स्क्रिफ्टको काम हातमा छ। वर्क आउट चलिरहेको छ। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? बिहान पूजापाठ सकिएपछि मुवालाई नास्ता दियो, बाहिर निस्कनुपरे निस्कियो। घर बसेरै गरे हुने काम भए घ
Jun152019 by Chautari Post OnlineNo Comments
‘ट्रस्ट बनून् स्वास्थ्य संस्था’
काठमाडौँ — डा. सन्दुक रुइतले एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा गरेर झन्डै डेढ लाख दृष्टिहीन मानिसलाई आँखा देख्ने बनाएका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको विकटवर्ती ओलाङचुङगोलामा जन्मे–हुर्केका रुइतले दार्जिलिङ, काठमाडौं, दिल्ली हुँदै नेत्र चिकित्साको पढाइ पूरा गरेका हुन् । ६४ वर्षीय रुइत अहिले पनि उनी संस्थापक रहेको तिलगंगा आाखा अस्पताल वा आफ्नै निजी क्लिनिकमाव्यस्त भेटिन्छन् । रुइतले स्थापना गरेको हिमालयन क्याटाराक्ट प्रोजेक्टले बर्सेनि ५ लाख क्याटाराक्ट उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्छ । रोमन म्यागासासे पुरस्कार (२००६, फिलिपिन्स),पद्मश्री सम्मान (२०१८, भारत), अर्डर अफ अस्ट्रेलिया (२००७) बाट सम्मानित रुइतसित कान्तिपुरका श्रीश भण्डारी र देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी : आँखा उपचारमा नेपालको स्थिति के छ ? अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो उपचार पद्धति र उपलब्धि के हो ? नेपालमा सन् १९८१ तिर आ
Jun142019 by Chautari Post OnlineNo Comments
अन्तर सम्वाद, खेलकुद
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कार्यकारी प्रमुख केशवकुमार बिष्टको पदावधि आगामी असार ९ गते सकिँदै छ । चार वर्षे कार्यकालपछि राखेपमा नयाँ नेतृत्व आउनु कुनै नौलो कुरा होइन् । राखेप नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय भएकाले नयाँ आउने सदस्यसचिवको विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुनु पनि स्वभाविक नै हो । किनभने नयाँ आउने सदस्यसचिवको खेलप्रतिको दृष्टिकोण, उनले बनाउने योजना, कार्यशैलीजस्ता कुराले नै मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । त्यसो त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अहिलेसम्म थुप्रै सदस्यसचिव पाइसकेको छ । यसबीच कुन–कुन सदस्यसचिवले कस्तो काम गरे भन्ने कुरा पनि चर्चाको विषय बन्नुपर्छ । २०७२ मा राखेप सदस्यसचिवको रुपमा केशवकुमार बिष्टको उदय भएको हो । वास्तवमा सदस्यसचिवको रुपमा खासै चर्चामा नरहेका बिष्टको राखेपमा प्रवेश धेरैका लागि अप्रत्यासित घटना थियो । उनी निकै
Jun122019 by Chautari Post OnlineNo Comments
अन्तर सम्वाद, कृषि र किसान
चर्चित हास्य कलाकार हरिबंश आचार्यले कुनै वेला तरकारी खेति गरेका थिए, मदनकृष्ण श्रेष्ठसंग मिलेर । त्यसवेला अनुदान धेरै लिएको भनेर खुवै चर्चा पनि भएकोथियो । तर आफु त्यो फार्ममा हुदासम्म कुनै अनुदान नलिएको दावी गर्छन् । यसैको सेरोफेरोमा गरिएको छोटो कुराकानी । तपाइले अहिलेसम्म कहिलै हलो जोत्नुभाको छ, कि छैन ? जोत्या छैन । जस्तो कृषिसंग सम्बन्धीत कुराहरु केहि गर्नु भएको छ ? कुटो खन्या छु कोदाली खन्या छु, गार्डेमा चाही अहिले नि म काम गछु । सानो बेलामा त कोदाली नि खन्थे, अब अहिले त जग्गा नै छैन । काठमाडाँैमा कोदाली खन्ने हैन, गाँँउघरतिर खन्ने । मेरो चै पनौति भन्दा माथि शंखू भन्ने ठाँउ हो, हैन त्याँको चै म कृषककै छोरा हु । मेरो बाउ आमा कृषकनै हुनुन्थ्यो पहिले, अनि मेरो त्या अझैपनि जग्गा जमिन छ, तर मेरो सबै काम कठमाडौँमै सेन्ट्रलाइज भएकोले आफु गएर गर्न भ्याउदिन । आफन्तहरुलाई हेरीदेउ